I Toliara na Toliary dia kaominina malagasy, renivohitry ny distrikan' i Toliara I, faritra Atsimo-Andrefana, Faritanin' i Toliara, tanàna lehibe indrindra any atsimon' i Madagasikara. 540 km miala an' i Fianarantsoa ary 951 km miala an' Antananarivo renivohitra, amin' ny lalam-pirenena faha-7 no misy ity seranan-tsambo ity. Ny kaodin-kaominina dia 52099 ary ny kaodin-distrika dia 520.
Ny isan' ny mponina ao aminy dia 195 904 araka ny faminavinana natao tamin' ny taona 2000. Tombanana ho 250 000 mahery ny mponina tao tamin' ny taona 2014. Amin' ny maha-tanàna misy seranan-tsambo azy dia toerana lehibe fanafarana sy fanondranana entana toy ny taretra, savony, tsiraka rongony, landihazo, vary ary voanjo.
Ny tanànan' i Toliara tamin' ny taona 2007
Renivohitry ny faritra atsimo eto Madagasikara i Toliara izay nahitana fitombon' ny mponina tao anatin' ny roapolo taona noho ny fifindrà-monina be dia be avy any ambanivohitra, izay nahatonga ny mponina ao amin' io tanàna io ho 200 000 mahery tamin' ny 1996.
Ny Vezo, mpanjono mpifindrafindra monina, dia anisan' ny foko tompontany saingy eo an-dalam-panjakan' ny mpifindra monina izy ireo, indrindra fa ny avy any atsimo (Mahafaly, Tanalana, Masikoro, Antandroy) izay mihoatra ny antsasaky ny mponina ao amin' izao fotoana izao. Miampy an' ireo ny mpifindra monina hafa izay mitana toerana eo amin' ny fitantanan-draharaham-panjakana sy eo amin' ny sehatra tsy miankina.
Misy masoivohon'ny banky. Misy seranam-piaramanidina akaikin'ilay tanàna. Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana hopitaly na toeram-pitsaboana ao. Misy seranana an-dranomasina ao. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Misy fianarana ambaratonga faharoa (lise). Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Misy tranom-pitsarana maharitra any. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Misy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Ny Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) no manome ny rano. Misy biraom-paositra ao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Toliara&oldid=1044982"
Dernière modification le 14 Mey 2022, à 10:55
Voaova farany tamin'ny 14 Mey 2022 amin'ny 10:55 ity pejy ity.